Xadka u dhaxeeya Itoobiya iyo Eriteeriya oo dib loo furay 20 sanno kadib - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeEast AfricaXadka u dhaxeeya Itoobiya iyo Eriteeriya oo dib loo furay 20 sanno kadib
September 11, 2018 Puntland Mirror East Africa, World 0
Raysulwasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo Madaxweynaha Eriteeriya Isaias Afwerki intii lagu guda jiray munaasabadii dib u furista xadka. [Sawirka]
Addis Ababa-(Puntland Mirror) Itoobiya iyo Eriteeriya ayaa u dabaaldegaya dib u furida labo meelood oo muhiim u ah isku socoda in ka badan 20 sanno kadib markii la xiray dagaalkii xadka.
Boqolaal qof oo ka kala socda labada dal ayaa xabadka is-gashay iyada oo ay munaasabada hormuud u ahaayeen hoggaamiyaasha labada dal.
Waxay ahayd calaamadihii ugu dambeeyay ee dib u heshiisiinta labada dal oo horey u ahaa cadow.
Raysulwasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo Madaxweynaha Eriteeriya Isaias Afwerki ayaa wada saxiixday heshiiska nabada bishii lasoo dhaafay ee July, kaasoo dib u soo celiyay xiriirka diblomaasiyadeed iyo midka ganacsi ee ka dhaxeeya labada dal.
Dib u furista ayaa timid sanadka cusub ee Itoobiya oo hadda loo dabaaldegayo.
Dagaalka dhexmaray labada dal ayaa bilaabmay bishii May ee sanadkii 1998, waxaana ku naf waayay kumanaan qof.
Dib u furista Bure waxaay Itoobiya oo aan bad lahayn u fududeyn badda. Deegaan kale oo xadka kuyaala oo u dhow magaalada kutaala xadka Itoobiya ee Zalambessa ayaa sidoo kale la furay.
November 5, 2018 Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo dooneya in ay cunoqabateynta ka qaadaan Eriteeriya
September 17, 2018 Hoggaamiyaasha Itoobiya iyo Eriteeriya oo heshiis nabadeed ku saxiixday Sucuudiga
September 9, 2018 Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres oo soo dhaweeyay dib u heshiisiinta Geeska Afrika
Garowe-(Puntland Mirror) Somalia’s President Mohamed Abdullahi Farmajo will pay a visit to Puntland this month, according to a government source. The President will meet with Puntland officials and community during his visit to the [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Hoggaamiyaasha dowladaha deriska la ah dalka Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco soo gaaray caasimada Soomaaliya ee Muqdisho si ay uga qaybgalaan caleemo-saarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, Raysulwasaaraha [...]